DISTRIKAN’ANTSALOVA : Voasambotry ny fokonolona sy zandary ilay mpimasy mpitaiza dahalo
Anisany mampirongatra ary mampahazo vahana ny asan-dahalo any ambanivohitra amin’ny Faritra maro manerana ny Nosy ny fisian’ireo mpimasy mpitaiza sy mpanome ody ireo jiolahy. 26 mai 2020
Miezaka kosa ny mpitandro filaminana tato ho ato ny amin’ny famongorana azy ireo.
Miara-miasa akaiky amin’ny fokonolona hatrany mba hahazoana loharanom-baovao mikasika izany. Toy ny tranga tao amin’ny fokontany Manavony, Kaominina Bekopaka, Distrikan’Antsalova, lehilahy iray malaza ho mpitaiza dahalo no voasambotry ny Zandary ny faha 24 mey lasa teo.
Mpamatsy fanafody ireo olon-dratsy io lehilahy io raha ny fanazavana voaray avy amin’ireo olon-tsotra monina ao an-toerana. Nifarimbona araka izany ny mponina sy ny Zandary avy ao amin’ny CSAO Beravina ary ny avy ao amin’ny Borigadin’i Bekopaka nisambotra ity farany.
Rehefa natao ihany koa ny fisavana ny trano fonenany dia nahitana karazana fanafody gasy maro niampy tapakazo ary kahie fampiasa amin’ireo tapakazo ireo. Notazomina ao amin’ny Borigady Bekopaka hatreto ilay mpimasy mba hatao famorana lalina mialoha ny hiakaran’ny raharaha eo anivon’ny Fampanoavana.